10 လ, ကလေး - ဖွံ့ဖြိုးမှု, အာဟာရ, menu ကို mode ကို။ 10 လ၏ကလေးတစ်ဦးအဘယ်အရာကိုတတ်နိုင်သမျှ?
ရငျ့၏စင်မြင့်တစ်ခုကြင်နာ - တစ်နှစ်မှတစ်ဦးကလေးတက်၏အသက်တာ၌တစ်ဦးချင်းစီလ။ ဒါဟာအလွန်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာဖွံ့ဖြိုးနှင့် 10 လပါလိမ့်မည်သောအခါသူငယ်ပြီးသားဘယ်လောက်သိတယ်။ မိဘများနီးကပ်စွာကလေးအသစ်သောအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူဝမ်းမြောက်သည်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်အမျိုးအနွယ်၏ပြည်နယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပညာရေးအတွက်ပျောက်ဆုံးနေကွာဟချက်အတွက်ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
အသက်တာ၏ပထမခြောက်လအတွက်ကလေး 600-900 g နဲ့တစ်လလျှင် 2-3 စင်တီမီတာ၏ပျမ်းမျှဖြည့်စွက်, တက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအရှိန်အဟုန်ကြောင့်သူငယ်၏တိုးလာသန်စွမ်း၏နှေးကွေး။ တစ်ဦးချင်းအားလုံး, သင်မူကားဘုံ parameters တွေကိုမှလာနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်မူမမှန်ကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရှိပါသည်လျှင်မိဘများနှင့်ကလေးအထူးကုဆုံးဖြတ်ရန်အညီသောစံချိန်စံညွှန်းရှိပါတယ်။ အညွှန်းကိန်းသတ်မှတ်ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စု, ကို cut သို့မဟုတ်ကြောင်းသတိပေးရပါမည်။ သူ့ကိုအလိုအရ:
ပျမ်းမျှကလေး၏အလေးချိန် 7,9-11 ကီလိုဂရမ် 10 လကြာမှာ။
10 လအတွင်းကလေး၏ပျမ်းမျှတိုးတက်မှုနှုန်း - ယောက်ျားလေးများအဘို့ 68-79 စင်တီမီတာ, မိန်းကလေးများ 66-78 ဘို့။ အမှား - ပေါင်းသို့မဟုတ်3စင်တီမီတာအနုတ်။
အသက်အရွယ်အရသိရသည်လျော်သောအစာအာဟာရကိုအာရုံစိုက်, သူ့ကိုပြည့်စုံစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ကြိုးစားနေငယ်ရွယ်ဆိ၏မိဘများသည်။ ဤအချိန်တွင်ဖြည့်စွတ်အစားအစာများ၏နိဒါန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ 10 လအတွင်းထိုသူငယ်၏အစားအသောက်များတွင်မတူညီနေ့ခင်းဘက်ပါဝါလုံးဝသမားရိုးကျထုတ်ကုန်အစားထိုး: စသည်တို့ကိုဟင်းချို, ငါးနှင့်အသားဟင်းလျာများ, အချိုပွဲ, မိတ်ဆက် စားနပ်ရိက္ခာပိုကောင်း, ပေါင်းပြုတ်သို့မဟုတ် stewed, ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သဗီတာမင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကလေးသူငယ်အခဘုံစားပွဲသို့ပြောင်းရွှေ့သည်, ဖြစ်နိုင်လျှင်မိခင်နို့သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာသူ၏မိခင် (နေ့စဉ်ပမာဏ၏ 1/4 ထက်ပိုမပါ) နို့တိုက်ကျွေးမှုပြီးစီးရန်။
10 လအတွင်းအစားအစာကလေးမိခင်နို့ကိုလက်ခံရရှိပါဝငျသညျ။ အစားအသောက်များတွင်အဆိုအရကလေးအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ suckles နှင့်ချက်ချင်းနှိုးပြီးနောက်နို့၏လိုအပ်သောဆေးထိုးရပါတယ်။ ဤသည်နံနက်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြည့်အဝနံနက်စာမဟုတျပါဘူး, အခြို့အချိန်ပြီးနောက်, က porridge သင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်စုစုပေါင်းအစားအသောက်များတွင်၏အခြားအစားအစာများကို။ အဲဒီအစားနို့များ - မိခင်ကျွေးမွေးထားပြီးသို့မဟုတ်ပုလင်း-ကလေးလျှင် - ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေအောင်အရောအနှောပေးထားနိုင်ပါတယ်။ 10 လအတွင်း, ကလေး2မှ6နို့တိုက်ရာမှပျောက်ဆုံး။
ပြီးသားထဲသို့ဝင်ဆယ်အရွယ်မှအဓိကဆွဲဆောင်လျက်, ဆိ menu ကိုတစ်ဘုံစားပွဲနှင့်အတူသစ်ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဤသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နို့ထွက်အစားအစာ, gluten-အခမဲ့သီးနှံ , အသား, ငါးနှင့်အခြားသူများ။ အဆိုပါကိုက်ညီမှုသေချာပေါက်ပထမဦးဆုံး incisors ဒီအချက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အရည်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူအံသွားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှစတင်ခဲ့သည့်အခါ, 10 လကြာမှာကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးဖို့အဘယ်သို့နည်း, လတ်ဆတ်တဲ့အသီး fit: သစ်တော်သီး, ပန်းသီး, Plum, ငှက်ပျော။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 9-10 လကြာကဲ့သို့သောတစ်မြှူ, မိတ်ဆက်:
mashed အသား နှင့်အသားအစားအစာများ (meatballs meatballs);
(ရေနံနှင့်အတူ) monozlakovye သီးနှံ;
10 လအတွင်း Menu ကိုကလေးက
ကလေးများထုတ်ကုန်အသစ်တွေ, အထူးသဖြင့်အသေးစားဓာတ်မတည်၏အစားအသောက်များတွင်၏နိဒါန်းမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်။ ထို့ကြောင့်, 10 လကြာမှာ menu ကလူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားပေမယ့်ကျယ်ပြန့်သည်, အစားအစာအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ အစားအသောက်အထိ4နာရီခန့်5အစားအစာများ, သူတို့ကိုအကြားအားလပ်ချိန်အကောင့်ဆိုလို:
သရေစာ (ပထမညစာ) ။
ကလေးသူငယ်အခကို 10 လကြာလှည့်သည့်အခါ, တနေ့ပျမ်းမျှအပေါ်သူ 1 မှအစားအစာ၏ 1.5 ကီလိုဂရမ်မှစားတတ်၏။ အသီးအသီးအဘို့ကို၏အသံအတိုးအကျယ် 200-250 ဂရမ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်မှုနှုန်းကွဲပြား၏ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်. ။
10 လအတွင်းနမူနာ menu ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, mashed အာလူး - 200-250 ဂရမ်
ဂျုံယာဂု - 200 ဂရမ်
ကစော်ဖောက်ခြင်း - 200-220, အ
စင်ကြယ်သောအသီး - 100-110 ဂရမ်
အနှစ် - 1 pc ။ (တစ်ပတ်ကို 1-2 ကြိမ်) ။
အသား - '80
ဖျော်ရည် - 60-70 ml ။
ငါး - '50
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ - 50 ဂရမ်
crackers, အဖြူရောင်မုန့်, ဘီစကွတ် - 10 ဂရမ်
ထောပတ်, rastitelnoe- 5-6 ဆ
ကလေးသူငယ် mode ကို 10 လကြာ
အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကြွင်းသောအရာ, အစားအစာ, လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေး - ကလေးစောင့်ရှောက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်, မိဘထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးအမိန့်ရိုက်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ Mode ကိုပင်ဗိမာန်တော်၌သေးငယ်တဲ့ကလေးနဲ့အတူ, သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်း၏အပြည့်အဝအတွက်အသက်ရှင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဘယ်လောက် 10 လမှာကလေးတစ်ဦးအိပ်ပျော်? နေ့လည်တစ်စိုးမိုးရေးအဖြစ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အကြောင်းကို 60 မိနစ်, နေထိုင်များ၏ကြာချိန်များအတွက်:
အစောပိုင်းမြင့်တက် (6-7: 30) ထောက်ပံ့ပေးနေ့ခင်းဘက်အိပ်စက်မှု 11-12 နာရီလိုအပ်သည်။
00-16: 30 စက္ကန့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, 15 န်းကျင် - နေ့လယ်စာပြီးနောက်။
သူက 8 မှ 12 နာရီကနေညဥ့်အစအနမှာအိပ်။
အကြံပြုနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အိပ်စက်ခြင်းမနိုး၏ပြောင်းကာလကိုပါဝငျသညျ။ ချက်ချင်းအလုပ်ရှုပ်နံနက်စာ, ဂိမ်းများ, စီးနှိုးပြီးနောက်နံနက်အချိန်ကလေး။ ဒုတိယရေစာပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ပြီးတော့သင့်တယ် - နောက်တဖန်, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်း, အပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်နေဖို့, အားကစားရုံ, အနှိပ်။ သေချာပေါက်ချက်ချင်းညစာစားပြီးအိပ်ရာဖို့သင့်ကလေးကိုမထား, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကလေးတစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစာပေနဲ့အတူဖတ်အဖြစ်တိတ်ဆိတ်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်နေတာ, တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကြွင်းသောအရာပြီးနောက် - နောက်တဖန်မုန့်ညက် (ပထမညစာ), ဂိမ်းများနှင့်လမ်းလျှောက်, ရေစာ, ရေချိုးနှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်။
10 လအတွင်းဆိတ်ပြီးသားဘယ်လောက်သိတယ်နဲ့နားလည်နိုင်သည်။ သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ၌စိုက်ပျိုးထားပါတယ်: ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုညှိနှိုင်းဖို့လေ့လာသင်ယူနှင့်ဒဏ်ငွေမော်တာကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်အလျင်အမြန် crawls, အချို့ကလေးငယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့စတင်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ဦး - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူဆက်သွယ်ဖို့ပါတီများဖြစ်လာသူတို့စကားပြောစာပိုဒ်တိုများဝမ်းမြောက်စွာတောင်းဆိုမှုများကိုလိုက်လျောခြင်းနှင့် (ဥပမာအဘို့, လက်သည်းဖြတ်တောက်) သူတို့ကိုအဆိုးမနှစ်မြို့ဖွယ်အရေးယူတုံ့ပြန်နားလည်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကျွမ်းကျင်မှု 10 လအတွင်းတစ်ဦးကလေးရှိသင့်, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်:
မိန်းကလေးများရှေ့တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏သူတို့ရဲ့ရွယ်တူ၏ monotonous လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်ကြပြီး: လျင်မြန်စွာသင်ယူ အိုး တစ်ဇွန်းကိုသုံးပါ, ပထမဦးဆုံးစကားများ။
ယောက်ျားလေးများလွတ်လပ်ရေးရှာခိုင်မာပြသ, ဒါသူတို့အစောပိုင်းလမ်းလျှောက်စတင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့မကြာခဏကင်းမဲ့ဇွဲ။
မကြာခဏ moms နှင့်အဖေသည်ဆိတ် 10 လအတွင်းနိုင်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုအံ့ဩခြင်း? ဤအချိန်တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခံနေရအဓိကကျွမ်းကျင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ်။ လှုပ်ရှားမှုညှိနှိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတမျှသှဖေလည်းမရှိလျှင်။
နှစ်ဦးစလုံးလက်နှင့်အမှုအရာကို ယူ. သွားကြလော့
သားသမီးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အပြည့်အဝမိဘမြား၏ပခုံးပေါ်မှာအိပ်ရကြ၏။ သူတို့ကသူ့ကိုအတွက်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာရှိအောင်မှ 10 လအတွင်းကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။
လုံခြုံစွာကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့, တိုက်ခန်းတဝိုက်ရွှေ့ခွင့်ပြု, လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကလေးအခန်းတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာကလေးငယ်ဝေါဟာရ secure မှမဆိုခေါင်းစဉ်အပေါ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အသုံးဝင်သောတေးဂီတနှင့်ကခုန်, ဒဏ်ငွေမော်တာကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ဂိမ်းများ, ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်ယူခြင်းစိတ်ဝင်စားအငယ်ဆိ။ လက်မှာအမြဲဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများများ၏အကူအညီဖြင့်ထိုအတူသူတတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးရန်။ ဒါဟာသင့်ကလေးကိုခွင့်ပြုပါရန်အသုံးဝင်သည်:
groats တစ်ဗန်းအပေါ် iterate;
ကောင်းပြီ, အခါအိမ်သူအိမ်သားအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကစားစရာရှိပါတယ်။ : ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဆယ်ကလေးသည်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်အတူပါဝင်နေသည်
အရုပ်နှင့်အခြားကစားစရာများအတွက် crockery ။
10 လ၏အသက်အရွယ်မှာကလေးကိုယ်တော်တိုင်သိမ်းပိုက်နိုင်သူခေတ္တမျှကစားစရာ, လှည်းဆောင်သွားလေ၏။ ဒါဟာအစအန (သို့သော်ကြီးကြပ်) မှထွက်ခွာရန်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်ကလေးတစ်ဦး၏ပစ်မှတ်ထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူဂိမ်းလိုအပ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသားသမီးများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတစ်စောင်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူပြီးမှ, တစ်ပိရမစ်ကိုစုဆောင်းဖို့ sorter နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအိပ်ပျော်ဖို့အရုပ်သွင်းထားနိုင်ကြသည်။ ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အာရုံခံအပြန်အလှန်ရည်ရွယ်မော်တာ, မိန့်ခွန်း, ခွဲခြား 10 လကြာပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်း။ : ဥပမာ, ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများင်
clothespins နှင့်အတူအတန်း - ကိုရှာဖွေဖယ်ရှား;
သူငယ်၏ 10 လ - မိဘစိုက်ပျိုးကလေးနဲ့အတူဆက်သွယ်၏ဝမ်းမြောက်ခံစားရတဲ့အခါအံ့သြဖွယ်အသက်, ။ ဤသည်ကပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏ကျွမ်းကျင်မှုကို တင်. ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်သည့်အတွက်ခက်ခဲပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ပဲကလေးသင်ယူပါလိမ့်မယ် လမ်းလျှောက် နှင့်ကျွမ်းဘားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာ, ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖွငျ့ဤများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။ မိဘများ၏လျော်သောလုပ်ရပ်များ - ထိုသူငယ်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ကျန်းမာရေး။
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးမုန့်ညက်မှုအတွက် Kashi - ကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးစည်းမျဉ်းများတစ်ဦး rating
မွေးကင်းစအတွက် colic ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အစားအစာ
6 လ၏ကလေး၏ mode ကို
မွေးကင်းစအတွက်အဖု - မွေးကင်းစအတွက်အဖုအမြိုးမြိုး၏ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများနှင့်ကုစား
အတုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပေါ်4လအတွင်းကလေး၏ menu ကို
မီးလျှံ 3d နှင့်အတူလျှပ်စစ်မီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်
Hydrangeas paniculata '' Pinky Winky ''
ပရိတ်သတ်တွေ Malibu အတွက်လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းသူမ၏သားသမီးများ၏ထူးဆန်းတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဘို့အ Charlize Theron ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
Acute pyelonephritis - လက္ခဏာများ
ဂတ်စ် Burner တပ် ချ.
အဖြူရောင်ကော်လာနှင့် cuffs နှင့်အတူအနက်ရောင်ဝတ်စုံ
ကူညီပေးသည်အဘယျသို့အဓိပ်ပာယျ - အိုင်ကွန် "သန့်ရှင်းသောမိသားစု"?